Aphasia na kompeni na kọmputa. Njikọ nke mmụta cognitive na ọzụzụ asụsụ - Cognitive Training
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Aphasia na kompeni na kọmputa. Nchikota nke ozuzu oke na iku asusu
Anyị ekwuwo okwu mgbe mgbe banyere aphasia, ha abụọ na-akọwa nkenke oge kedu ihe ọ bụ, ma site n’ikere òkè nri iche echiche e ihe bara uru maka ndị ọrịa na ndị ọkachamara. Anyị kwukwara gbasara teknụzụ teknụzụ na imeghari ya na ike na-eme. Banyere telererapy, anyị ekwuola banyere okwu a ọtụtụ oge, dịka ọmụmaatụ na itinye ya n'ọrụ ọnya isi.
Dịka a hụrụ na ọnọdụ ndị ọzọ, mgbanwe mgbanwe na ụzọ ndụ metụtara COVID-19 emekwala ka a gbanwee ụzọ dị iche iche mmadụ si arụ ọrụ, na-anwa ime ka ihe azụ ahụ kwekọọ na mkpa nke ndị ọrịa n'otu n'otu. N'ebe a, na nnọpụiche, tele-rehabilitation na-eburu otu ihe dị mkpa. N'ezie a na-ewere ya na ọnọdụ nke aphasics, ndị ọrịa bụ ndị n'ọtụtụ ọnọdụ chọrọ njikwa ogologo oge na-arụsi ọrụ ike, na-esiri ike iwere hypothetical "echi".
N’aka nke a, nyocha sayensị na-abịakwute anyị, nke enyere n’aka, na-enwekarị ike inye ndị ọkachamara ihe ngosipụta dị mma banyere ụzọ kachasị mma, na-agba mbọ hụ na enwetara nsonaazụ kachasị mma dabere na njirimara onye ọrịa ahụ akọwapụtara. N'akụkụ a, e bipụtara nyocha nke Zhou na ndị ọrụ ibe ya na 2018 nke ha nọ na ya enyocha nsonaazụ arụgharị kọmputa nke na - aphasia, na atụnyere nsonaazụ nke otu ọzụzụ a na-eme n'ebe dị anya ma e jiri ya tụnyere otu ọkachamara ndị nọ ugbu a duziri.
Ka anyị gaa nyocha nyocha ...
A họrọ mmadụ 40 nwere aphasia wee kee ya mpaghara anọ:
10 mmadụ mere mmezigharị kọmputa n'ụlọ ọgwụ;
Mmadụ iri nọchiri anya ndị na-ahụ maka njikwa n'ụlọ ọgwụ (ọgwụgwọ oge niile ugboro abụọ n'ụbọchị);
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Alcune riflessioni, da logopedista, sul libro "Ogni parola che sapevo" di Andrea Vianello
10 mmadụ mere mmezigharị kọmputa onye casa;
Mmadụ iri nọchiri anya ndị na-ahụ maka njikwa onye casa (itinye aka na mkparịta ụka ezinụlọ ruo nkeji iri atọ n’ụbọchị).
Iji nwalee nsonaazụ nke ọzụzụ ahụ, ndị niile sonyere na nyocha ahụ, tupu mgbe ọ bụla ma rụzigharị ha (ụbọchị iri na anọ maka ịhazigharị ụlọ ọgwụ, ụbọchị iri atọ maka imezigharị dịpụrụ adịpụ) ka ejiri ule dị iche iche were mara asụsụ ahụ na ule dị iche iche: Western Aphasia Batrị (WAB) na Ike Nkwukọkọ na Nlele Ndụ kwa ụbọchị (CADL).
Ma gịnị ka mmezigharị gụnyere?
Ndị ọrụ nyocha ahụ jiri ọtụtụ ihe omimi kọmputa gbasara akụkụ ụfọdụ nke asụsụ mana ngalaba na-abụghị asụsụ.
nell 'Mpaghara asụsụ, Ihe omume lekwasịrị anya onu ghota ya, Ederede, ugboro ugboro, ekpemekpe e ide (Njikọ ihe onyonyo-aha, mkpụrụedemede mkpụrụedemede, ịghọta mkpụrụedemede, oge ncheta ihe, ikwugharị ahịrịokwu, ikwugharị okwu, ịkpọọ aha maka mkpuru okwu na ngwaa, ịkpọ site na njikọ ọnụ ọgụgụ, ịkpọ site na njikọ onyonyo-ederede, ide ederede nke okwu na nkebi ahịrịokwu gere ntị, nkọwapụta ederede nke onu ogugu, iji okwu mmechi, kpochapu ndi n’abughi okwu, iwu okwu)
nell 'mpaghara cognitive (na-abụghị ọnụ), omume omume lekwasịrị anya attenzione, ncheta e ndi isi oru (mwepụta nke ozi ndị ejikọtara, mmega Go / No-go, Stroop task, ndị ọzọ dabere na flanker, “mmegharị” mmega ahụ, itinye uche na mmega ahụ na arụ ọrụ ebe nchekwa dabere na n).
Ihe omumu ndia a bara uru? There nwere ọdịiche dị na iji ha na ọnụnọ anụ ahụ nke onye ọrụ ma ọ bụrụ na e jiri ya mee ihe na ịnọ otu ebe?
Ozi oma. Usoro ọgwụgwọ a dị irè, nke ahụ bụ njikọta mmega metụtara asụsụ na “ọgụgụ isi” mere ka emeziwanye ka esi ekwu okwu na ikwu okwu nkwukọrịta nke ndị ọrịa aphasic. Achọpụtaghị mmụba nke arụmọrụ ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ dị kaNgwa Aphasia nke WAB, kamakwa na okwu dị iche iche nke otu batrị (asụsụ asusu, nghọta ọnụ, ikwugharị na ịkọ aha); Ọzọkwa, dị ka ọhụụ gosipụtara site na mmelite nke akara dị na CADL, nsonaazụ nke nrụzigharị kọmpụta agbatịkwuru na nkwukọrịta ndị ọzọ, ọ bụghị naanị asụsụ.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Tinyegharịa ederede na aphasia iji ... WhatsApp
Agbanyeghị, ekwesiri ịmara na, n'agbanyeghị na ụlọ ọgwụ ma ọgwụgwọ dịpụrụ adịpụ, ụzọ izizi metụtara nkwalite ndị ka ama ama. Ya mere, ọnụnọ nke ọkachamara na-anọgide dị mkpa iji na-ekwe nkwa nsonaazụ ndị ọzọ dị mkpa; N'ọnọdụ ọ bụla, ojiji nke ngwaọrụ kọmputa eji eme ihe na tele-ịhazigharị na-anọchite anya mmezi dị mma iji nwee ike ịkwalite ụfọdụ nkà mgbe ọnụnọ anụ ahụ nke onye ọrụ ahụ agaghị ekwe omume, ma ọ bụ dozie ụgwọ ọrụ na uru (ịrụ ọrụ na-enweghị obi abụọ na-ebelata ụgwọ nke ghara ịgbanwe).
A 'ozi oma ndi ozo bụ na saịtị a, n'ime anyị GameCenter enwere otutu ngwa nwere ike ịrụ ọrụ na akụkụ asụsụ na njikwa asụsụ nyocha:
Maka akụkụ asụsụ anyị nwere ihe pụrụ iche ngalaba maka aphasia nke anyị na-agaghị ebi na ya n'ihi na ọnụ ọgụgụ ngwa dịnụ bara ụba ma anyị na-adụ gị ọdụ ka ị lelee;
Maka akụkụ cognitive anyị raara onye ọzọ nye ngalaba maka ngwa ọdịnala na nlebara anya na ọrụ ndị isi. Naanị ịkọwa ole na ole nke nyocha ahụ anyị kwurula, enwere ọtụtụ ụdị oge na ụdị dị iche iche n-azụ (mana ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ nyefere na ebe nchekwa).
Aphasia: ihe ndi anyi n’ekele
Zhou, Q., Lu, X., Zhang, Y., Sun, Z., Li, J., & Zhu, Z. (2018). Telererapy jikọtara asụsụ na -ekwu okwu na ọgụgụ isi n’ezie kwalitere mgbake na ndị ọrịa aphasia. Frontiers na akparamaagwa, 9, 2312.
aphasia, nkwuputa aphasia, ẹphe aphasia, aphasia ọzụzụ kọmpụta
Aphasia na kompeni na kọmputa. Nchikota nke ozuzu oke na iku asusu2020-04-132020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/04/teleriabilitazione-afasia-1.jpg200px200px
Nyocha nke neuropsychological: ọ ga - ekwe omume?Edemede, Dementias, Nyocha